फाइभजी ː हामीलाई घरमा पनि यसको आवश्यकता किन पर्छ ? - आर्थिक पाटी
फाइभजी ː हामीलाई घरमा पनि यसको आवश्यकता किन पर्छ ?
समयसंगै हरेक कुरा स्मार्टर हुँदै गइरहेका छन्, हरेक होम अप्लायन्सेस् कनेक्टेड हुँदैछन् र तिनले एकअर्कासंग सहज समन्वय गर्दै काम गरी सहजता उपलब्ध गराओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसले वाईफाई माथि ठूलो बोझ थपिने निश्चित छ । फलस्वरुप न्यूनतम उत्पादन कनेक्ट गर्दापनि यसको रेस्पोन्स टाइममा ढिलाई हुने सम्भावना रहन्छ । यस्तो समयमा फाइभजीको आवश्यकता अझ बढ्ने निश्चित छ । फाइभजी सहितको स्मार्ट होम्स अर्थात् असिमित कनेक्शन, तिब्र गति र तत्सम् प्रतिक्रिया (ईन्स्ट्यान्ट रेस्पोन्स टाइम) ।